Vaovao - Ny fahasamihafana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana zavamaniry mifangaro lehibe
Ny tsy fitovizan'ny fiarovana ny tontolo iainana zavamaniry mifangaro lehibe
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny fiaraha-monina sy ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia, ny resaka fiarovana ny tontolo iainana dia nahasarika ny sain'ny olona bebe kokoa. Taorian'ny asa mafy nandritra ny taona maro, ny zavamaniry fampifangaroana marobe tontolo iainana dia nahatratra valiny voalohany, ary ireto no mampiavaka azy:
1. Fanaraha-maso hialana amin'ny loharanom-pahalotoana
① Fanaraha-maso ny vovoka. Ny zava-maniry mifangaro amin'ny tontolo iainana malalaky ny tontolo iainana dia mandray mpanangona vovoka mifanentana mba hamita ho azy ny fanangonana vovoka, ary hiditra ho azy ao anaty rafitra famokarana ho fampiasana metering, hampihena ny fahalotoan'ny vovoka faharoa; ny fitaovana famafazana dia napetraka ao amin'ny fasika sy ny tokotanin'ny vatokely mba hampihenana ny fiasan'ny fasika sy ny vatokely Ny vovoka.
② Fitsaboana rano maloto. Ilay zava-maniry mifangaro amin'ny tontolo iainana malalaky ny tontolo iainana dia miaraka amina mpampisaraka fasika amina fasika sy ny rafitra fanodinana rano maloto. Ny rano maloto sy ny sisa tavela azo avy amin'ny fiasan'ny gara mampifangaro dia misaraka amin'ny fasika sy vatokely aorian'ny fisarahana ny fasika-vatokely. Ampidiro indray ny rafitra famokarana rano hahazoana fivoahana rano maloto sy sisa tavela.
③ Fanaraha-maso tabataba. Ny zava-maniry mifangaro amin'ny tontolo iainana malalaky ny tontolo iainana dia mampiasa rafitra fanakorana vatokely fanamiana hampihenana ny herin'ny môtô sy ny tabataba; ny gara iray manontolo dia mampiasa rafitra maotera mitabataba mba hampihenana ny fiantraikan'ny tabataba amin'ny tontolo iainana. Ny fitaovana hovitrovitra sy ny fitaovana hafa dia mifamatotra amin'ny pad vibration hampihenana ny tabataban'ny vibration.
2. Tapaho ny lalan'ny fampitana
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny zava-maniry afangaro amin'ny tontolo iainana malalaky ny tontolo iainana mba hampitsaharana ny fifindran'ny loto dia ny fanodinana ny gara manontolo. Ny encapsulation dia manasaraka amin'ny fomba mahomby ny loharanon'ny fandotoana amin'ny tontolo manodidina ary mifehy ny loto amin'ny toerana voafetra, amin'izay hampihena ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana.
Ny hatsaran-tarehy no tena ilaina amin'ny zavamaniry mifangaro amin'ny tontolo iainana. Raha fintinina dia azo lazaina fa zavamaniry mandoto ny tontolo iainana dia orinasa maoderina izay manambatra tanteraka ny teknolojia fampifangaroana, ny teknolojia fiarovana ny tontolo iainana ary ny zavakanto maritrano. Ny firafitry ny gara rehetra dia misy fahatsapana hatsarana, mifanaraka amin'ny tontolo manodidina, ary mety ny fandaminana.
Raha fintinina, ny zava-maniry afangaro amin'ny tontolo iainana malalaky ny tontolo iainana dia manana tombony tanteraka ary tokana. Changli dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny zavamaniry mifangaro vaovao marobe nandritra ny taona maro, naka ny fiarovana ny tontolo iainana ho andraikiny manokana, ary nahatratra vokatra. Raha mila manatona sy mividy ianao,
Concrete Mixer Spare Parts, Rafitra fanangonana mitambatra, Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra,